स्वास्थ्यलाई अचुक फाइदा पुर्‍याउने जडिबुटीको पकवान शास्त्र :: स्वास्थ्यखबर :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
स्वास्थ्यलाई अचुक फाइदा पुर्‍याउने जडिबुटीको पकवान शास्त्र
स्वास्थ्यखबर शनिबार, साउन २४, २०७७, ०६:३०:००
मानव जीवनका लागि खाना एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो। बिनाखाना मानिस या कुनै पनि जीव केही जीवित रहन सक्दैन। तसर्थ, बाँच्न र स्वस्थ रहन खाना खानु अनिवार्य छ।
अहिलेको युगमा व्यावसायिक रुपमा खाना पकाउँदा सयौ जडिबुटी (हर्ब्स) प्रयोग हुन्छ। धेरैको सोचाइमा जडिबुटी भन्ने बित्तिकै औषधिको रुपमा मात्र प्रयोग हुन्छ भन्ने छ तर पकवानमा पनि जडिबुटीको ठूलो महत्व छ। विशेषगरी युरोपियन मुलुकबाट खानामा जडिबुटी मिसाउन थालिएको भए पनि अहिले संसारका सबै देशले बुझी-नबुझी खानामा जडिबुटी प्रयोग गरेको पाइन्छ। हामीले नेपाली खानामा प्रयोग गर्ने धनियाँ, पुदिना, मेथी, जिम्बु, छ्यापी, डुन्डु सबै जडिबुटी हुन्।
भारत, चीन, बेलायत, जापान, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मेक्सिको र थाइल्यान्डले आआफ्नो खानामा प्रयोग गर्ने सबै जडिबुटीहरु फरक छन्। शरीरमा रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउन पनि खानामा कुनै न कुनै जडी (हर्ब्स) प्रयोग गरिएको हुन्छ।
खानामा जडिबुटी मिसाउनाले खानाको स्वाद (फ्लेबर) बढाउने मात्र होइन, स्वास्थ्यवर्द्धक पनि मानिन्छ। सबै जडिबुटीको आआफ्नै स्वाद हुन्छ र स्वास्थ्यलाई पनि भिन्नभिन्न रुपमा फाइदा पुर्‍याएको हुन्छ।
जडिबुटी नमिसाई बनाएको खानामा के नपुगेको, के नपुगेको जस्तो हुने हुँदा हरेक खानामा आफ्नै हिसाबले जडिबुटी मिसाएर पकाइने एक स्टान्डर रेसिपी हुन्छ। तारे होटल तथा व्यावसायिक किचनहरुमा त यसको झन् महत्व छ। युरोपेली जडिबुटीहरु पनि अहिले नेपालमै उत्पादन हुने हुँदा बाहिरबाट निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता छैन। पहिलापहिला पकवानमा चाहिने जडिबुटी नेपालमा उत्पादन नहुँदा बाहिरबाट सुकेको (ड्राई) हेर्ब्सहरु प्रयोग गरिन्थ्यो भने अहिले नेपालमै सहज रुपमा पाउन थालिएको छ।
केके छन् व्यावसायिक किचनको खानामा प्रयोग हुने जडिबुटी?
खानामा प्रयोग हुने जडिबुटी विश्वभर सयौं छन् र अहिलेको व्यावसायिक किचनका लागि यो अनिवार्य पनि भइसकेको छ। तुलसी (बेजिल), पुदिना (मिन्ट), रोजमेरी, थाइम, ओरेगानो, सिलेन्त्रो, प्रार्सी, चाइबस, दिल (सोप), सेज, तारागन, धनिया, बेलिप्स, लेमन ग्रास, लेमोन लिप्स, फिनेल, चामोमाइल, लेभेन्डर, क्याटनिभ, कुल्यान्त्रो, चार्भिल, विन्टर सभोरी, स्प्रिङ्ग ओनिन (हरियो प्याज), ग्रिन गर्लिक (हरियो लसुन) स्प्रिङ्ग पम्किन (फर्सीको मुन्टा) पेपरमिन्ट, स्टिभिया, सेलरी, लिक, रुकुला, रकेट लिफ्स, वाइड पेपर आदि प्रमुख छन्। यी हर्ब्सहरु खानामा स्वादको लागि मात्र नभई सजावट (गर्निस) का लागि पनि व्यापक प्रयोग गरिन्छ। नियमित चाहिने हुँदा कतिपय तारे होटलहरुले त यी हर्ब्सहरु आफ्नै बगैंचामा फलाउन पनि थालेका छन्।
स्वास्थ्यलाई कसरी फाइदा पुर्‍याउँछ?
अहिलेको जमानामा खाना मिठो, आकर्षक र स्वादिलो मात्र भएर पुग्दैन। त्यो खाना खाँदा स्वास्थ्यमा कति असर पारिरहेको छ र स्वास्थ्यलाई केके फाइदा पुर्‍याउँछ, सबै खोजीनीति गर्ने सजग व्यक्ति नेपालमा पनि प्रशस्त छन्। त्यसैले खाना पकाउँदा हालिने सम्पूर्ण सामग्रीको खोज-अनुसन्धान र यसले पुर्‍याउने फाइदा र हानि, कुन बिरामीले केके खानु हुन्छ र केके खानु हुन्न, कति मात्रामा खानुपर्छ, वजन बढाउन केके खानु पर्छ र वजन घटाउन केके खानु हुन्न मात्र होइन, सो खाना खाँदा हाम्रो शरीरमा कति शक्ति (क्यालोरी) प्राप्त हुन्छसम्म हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ।
एउटा राम्रो पकवान शास्त्रीले यो सम्पूर्ण लेखाजोखा राखेको हुन्छ र जरुरी पनि छ। खानामा प्रयोग हुने प्राय: सम्पूर्ण जडीहरुले स्वाद बढाउने र आकर्षक देखाउने मात्र होइन, कुनै न कुनै रुपमा स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदा पुर्‍याएको हुन्छ। तुलसीले खाना पचाउने, छालाको समस्या निदान गर्ने, डिप्रेसन हटाउने, डाइबिटिज हुनबाट जोगाउने जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदा पुर्‍याउँछ भने पुदिनाले ब्रेस्टफिडिङ पेन कम गराउँछ, दिमागी चुस्तता बढाउँछ, कोल्ड फ्लुबाट बचाउने काम गरेको हुन्छ भने झन् रोजमेरीले त कयौ फाइदा पुर्‍याएको हुन्छ। जस्तै: कपाल बढाउन सहयोग गर्ने, शरीरमा दुखाइ कम गर्ने, स्ट्रेस घटाउने, फुड पोइजनिङबाट बचाउँछ, क्यान्सर हुनबाट जोगाउने काम गर्छ।
लेमन ग्रास र लेमन लिफ्स थाइ खानामा प्रयोग हुने प्रमुख हर्ब्स हुन र यी हर्ब्सहरुको पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी आफ्नै फाइदा छन्। ब्लड प्रेसस र कोलेस्टेरोल सन्तुलन राख्न, शरीरको वजन घटाउन, क्यान्सरको जोखिमबाट बच्न नियमित रुपमा लेमन ग्रास र लेमन खान सकिन्छ। शरीरमा भएका हानिकारक अर्गानहरुलाई हटाउन, मुटु स्वस्थ राख्न, दाँतलाई मजबुत राख्न थाइम हर्ब्सले प्रचुर मद्दत गरेको हुन्छ।
सेज हर्ब्समा भिटामिन र मिनेरल्स प्रचुर मात्रामा हुने हुँदा न्युट्रेसन प्याक्ट हाइका कारण स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै फाइदा छ। स्मरण शक्ति बढाउन, सीमित क्यान्सरहरुका लागि उपयोगी, ओरल र बोन हेल्थका लागि पनि सेज बहुउपयोगी जडी मानिएको छ। विभिन्न इन्फेक्सनसँग लड्न, युरिनरी ट्र्याकमा हुने संक्रमण रोक्न, अल्सर हुनबाट बच्न, कलेजोमा हुने संक्रमण रोक्न, कोलेस्टेरोल सन्तुलनमा राख्न सेलरी हर्ब्स हालेको खाना खान जरुरी हुन्छ। यी लगायत सबै हर्ब्सहरुले कुनै न कुनै रुपमा शरीरमा फाइदा पुर्‍याउने हुँदा खानामा कुनै न कुनै जडिबुटी मिसाएर पकाउनले स्वास्थ्य समस्या निदान हुन्छ।
हामीले नियमित रुपमा खाने गरेको धनियाँको पत्ता पनि एक किसिमको बहुआयामिक स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदा पुर्‍याउने जडिबुटी हो। यसले पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै फाइदा बोकेको हुन्छ। रुघाखोकीबाट बच्न, खाना पचाउन, कपाल बढाउन, महिनावारी नियमित गराउन, कोलेस्टेरोल सन्तुलन गर्न, हड्डी र आँखाको मजबुतीका लागि धनियाँ निकै उपयोगी जडी मानिन्छ।